တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: လယ်တီဆရာတော်၏ ဆုံးမစာများ
Posted by မေဓာဝီ at 6:30 AM
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဆုံးမစာတွေကို စာသာမက ကဗျာရှုထောင့်ကပါ ခံစားသွားပါတယ်.
နွားအိုကြီး အမော့သင်သလို ဆိုတာလေးကို သိပ်နားမလည်လို့ နည်းနည်းလောက် ထပ်ရှင်းပြပေးပါလား.
ခုလိုမျိုး တကူးတက တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမေ. တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ.
8/19/2007 7:38 AM
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ ရဲ့ ရတုတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ `ပုရေနိသင်´ ကို ကြိုက်ပေမယ့် ဘယ်မှာ ပြန်ရှာရမှန်းမသိလို့ မမေဓာဝီမှာ ရှိခဲ့ရင် တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
8/19/2007 1:35 PM
မမေဓာဝီ။ ဆုံးမစာတွေဖတ်သွားတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8/19/2007 6:24 PM
8/19/2007 7:25 PM
နွားအိုကြီး အမော့သင်ဆိုတာ ဒီလိုပါ ... နွားတွေကို ခိုင်းမယ်ဆိုရင် ခိုင်းလို့ရတဲ့ အရွယ်ရောက်တာနဲ့ ထမ်းပိုးတပ်ပြီး ကျင့်ပေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ထမ်းပိုးတပ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှ သူတို့ လယ်ထွန်ရင် လည်တိုင်မော့မော့ ကျော့ကျော့ကလေး ဖြစ်နေတော့တာပါတဲ့။
အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ အသက်ကြီးမှ ထမ်းပိုးတပ် လေ့ကျင့်တော့ ထမ်းပိုးနဲ့လည်း နေသားမကျ၊ မမော့လည်း မမော့တတ် ကျော့လည်း မကျော့ တော့ဘူးပေါ့။
ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆိုလိုတာက ... ငယ်တုန်းမှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ သင်ကြားလုပ်ဆောင်ရမယ့်သဘောလို့ ထင်တာပါပဲ။
ကျမ မှားနေရင်လည်း သိတဲ့သူများ ပြင်ပေးကြပါရှင်။
ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရရဲ့ စာတော်တော်များများ တော့ ကျမဆီမှာရှိပါတယ်။ စာအုပ်ထဲပြန်ရှာပြီး တွေ့ရင် တင်ပေးပါမယ်ရှင့်။
ကိုရွက်ဝါနဲ့ ကိုဖြိုး ကိုလည်း စာလာဖတ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
8/20/2007 5:03 AM
သိပ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဆုံးအမ တွေပါ မမေ။ ကျေးဇူးတင် သာဓုခေါ်ပါတယ်။
please, takealook at the letter on my blog.
8/20/2007 10:38 PM
ခွေးကြီးမှ လက်ပေးသင်… ဆိုတာနဲ့ အတူတူပါပဲ…
နုပျိုစဉ်မှာ … ပြုလိုချင်ရာ… သင်ယူလို့လွယ်ကူပေမဲ့…
အရွယ်နှောင်းကာမှ… ဘယ်ပြောင်းညာလှည့်တောင် …
သင်ဖို့မလွယ်ကူတာမို့… ဘယ်…ညာ… ဆိုတာကို..